ရုရှားနိုင်ငံက ခေတ်မီ S-500 လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်
Android နဲ့ပက်သက်သမျှ (251) Facebook နှင့်ပက်သက်သမျှ (6) ISOနဲ့ပက်သက်သမျှ (31) Movie (25) ကျန်းမာရေး (26) စာအုပ်များ (1) ပညာရေး (1) ဗဟုသုတများ (4) ဘိုကလေးမြို. သတင်းများ (3) ပြက္ခဒိန် (1) ပြည်သူ.ထံမှပေးစာ (2) ရင်ထဲမှလာသောစာစုများ (1) ရာသီဥတု (2) သတင်းများစုစည်းမှု (183) သရဲ အကြောင်းများ စုစည်းမှု (5) အင်တာနက်ပေါ်တွင် ငွေရှာလိုလျှင် (1) အသုံးဝင်သော ဆောစ့်ဝဲလ်များ (127) အားကစား (6)
လာရောက်လည်ပတ်သူများအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် - သီဟ (ဘိုကလေးသား)
Click Me Here !
Kyat Exchange Rate
သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေးနှင့် အနုပညာ)
► 09/29 - 10/06 (78)
▼ 09/01 - 09/08 (44)
နေပြည်တော်အသင်း၏ အသနားခံစာ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဆုံးဖြတ်
ဝနေလို့ပိန်ချင်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး နံနက်စာ
ရေကြောင်းအရာရှိ သင်တန်းသားနှစ်ဦး ညကလပ်ရှေ့တွင် အရ...
ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀ အကြီးဆုံးဆု ပိုင်ရှင် မပေါ်သေး
မကဒတ မြောက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ အကျယ်ချုပ်ချခံနေရ
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ ရုရှသမ္မတပူတင်တို့ တွေ.ဆုံ
မျိုးစောင့်ဥပဒေကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း နန်းသီရိမောင...
ဗီဇာ သက်တမ်းကုန် မြန်မာလုပ်သားများ နယ်စပ်တွင် သက်တ...
နံပါတ်ပြား အနက်ရောင်ကား မသုံးရနေ့အား သတ်မှတ်
မလေးရှား အလုပ်သမားများအတွက် သတင်းကောင်း
★ မြိတ်မြို့ နောက်လယ်ရပ် (၆)လမ်းတံတားအောက် ဘုရားကိ...
ရာထူး ၁၄၀ ကျော် တယ်လီနောဝန်ထမ်းခေါ်
ခင်ဝင့်ဝါ Miss Internet ဆု အပါအ၀င် ဆုလေးခု ဆွတ်ခူး...
UCam Ultra Camera Pro v4.0.2.090201 Apk 15MB
Camera360 Ultimate v 4.7 for Android
ပျားကောင်တုပ်ခံရသည့်အခါ ဦးစွာလုပ်ဆောင်ရန် နှင့် သိ...
ဒုဗိုလ်အဆင့်ရှိသူ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို အစိ...
သံတွဲမှာ တစ်ကိုယ်တော်ဆန္ဒပြမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရသူအမှု အာ...
ဘားအံမှာ ဘာသာပေါင်းစုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
မြိတ်တွင် သံဃာအတု သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်မည်
NCH VideoPad Video Editor v3.12 For All Win 7.4 MB
SMS စနစ်ဖြင့် အင်တာနက် လျှောက်ထားသူများ သတ်မှတ်ချိ...
ArcSoft PhotoStudio v6.0.5.128 For All Win 35MB
Memory ကတ်ကို password နဲ့ပိတ်ပြီး ကိုယ်တစ်ယောက်တည...
လုပ်ဆောင်ချက်တော်တော်စုံတဲ့ဆောစ့်ဝဲလ် အလန်း Free S...
အောင်မြင်ခြင်းနှင့် ကျရှုံးခြင်းဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ကြိ...
ကမ္ဘာလှည့်များအတွက် ဆွဲဆောင်မှုထိပ်သီး နိုင်ငံများတွ...
လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းဇာတ်ကားများ သုံးရက် အခမဲ့ပြမည်
အမျိုးသမီးငယ်များ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှု များလာသဖြင့် သု...
မွေးကင်းစကလေးကို ရေတိုက်ရင် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြေ...
ပြိုင်ကားစစ်ဆေးသည့် ရဲဝန်ထမ်းသုံးဦး ယာဉ်တိုက်ခံရ
ဘာကြောင့် သွားတိုက် သင့်တာလဲ ???????
အလှကြိုက်သူ မိန်းကလေးများနှင့် ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်း အေ...
မန္တလေးမြို့နယ် ခြောက်နာရီကြာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်ေ...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကျော်တော်-ကွမ်းတောင် ရထားလမ်းပ...
Sky Net ရုပ်သံလိုင်းမှ တရားဝင် ကြေညာထားသည့် အခွင့်...
ရုရှားနိုင်ငံက ခေတ်မီ S-500 လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး...
Facebook Messge ပို့လျှင် ပိုက်ဆံကောက်မည်
မဏိပူနယ်စပ်တစ်လျှောက် အာသံရိုင်ဖယ်တပ် အထူးစောင့်ကြပ်
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တကယ်လုပ်ရမှာက အစိုးရသာ ဖြစ်ကြေ...
Beranda » သတင်းများစုစည်းမှု » ရုရှားနိုင်ငံက ခေတ်မီ S-500 လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်
Ditulis oleh: Unknown - Sunday, September 1, 2013
ရုရှားနိုင်ငံက ခေတ်မီ S-500 လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်ကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် တပ်ဖြန့်ချထားသွားမည်
ရုရှားကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် အာကာသအတွင်းရှိ ပစ်မှတ်များကိုပင် တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်သည့် S-500 ခေတ်မီလေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး ဒုံးစနစ် အသစ်တစ်မျိုးကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် တပ်ဖြန့်ချထားသွားနိုင်ရန် အစီ အစဉ် ရေးဆွဲထားကြောင်း သြဂုတ် ၃၁ ရက် အင်တာနက် သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။
S-500 လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်သည် တီထွင်စမ်းသပ်မှု အဆင့်၌သာရှိနေပြီး ၎င်း၏ တာဝေးပစ်စနစ် သည် အာကာသ အတွင်းရှိ ပစ်မှတ်များကိုပင် ကောင်းစွာတိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးနိုင်ကြောင်းနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ပိုင်နက် နယ်မြေအားလုံးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရုရှားနိုင်ငံသည် အမေရိကန်၏ ဥရောပဒုံးကျည် ကာကွယ်ရေးစနစ် တည်ဆောက်မည့် အစီအစဉ်ကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်လျက် ရှိနေသော်လည်း ၎င်း၏ဒုံးကျည် ကာကွယ်ရေးစနစ် များကိုမူ ပိုမို၍ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
0 comments "ရုရှားနိုင်ငံက ခေတ်မီ S-500 လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်", Baca atau Masukkan Komentar
လာရောက်လည်ပတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီး ကူညီတဲ့အနေနဲ့ ဘေးမှာတင်ထားတဲ့ ကြော်ငြာလေးတွေကို ကလစ်နှိပ်ပေးနိုင်ပါတယ် thanks :D
SMS စနစ်ဖြင့် အင်တာနက် လျှောက်ထားသူများ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း Message ပြန်မလာပါက SMS ထပ်မံ ပေးပို့ရမည် ဟုဆို
၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက် နေ့မှ စတင်ကာ အသုံးပြုခွင့် ပေးခဲ့သော ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်သည့် SMS စနစ်ဖြင့် အင်တာနက် လျှောက်ထားခြင်း ဝန်ဆေ...
Facebook Messenger v3.0.1 Apk 10MB
Facebook Messengeသုံးစွဲသူ Android ဖုန်း /Tablet ပိုင်ရှင်တွေအတွက် 29 ရက်နေ့ 10 လပိုင်းက Update လေးပါ မားကပ်ထဲဝင်မရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ...
Krrish3(2013) mkv 700MB
အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ပါ ဇတ်လမ်းပုံစံလေးကတော့ စွမ်းအားရှင်လူဆိုးတွေကို နိုပ်နှင်းရတဲ့ဇတ်လမ်းလေးပါ မင်းသားရဲ့ ဇတ်ကောင်ကတော့ စူပါမင်းပါ ထိုင်...
iOS7HD Apex / Nova Theme v1.0 Apk 11MB
Apex and Nova Launcher အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် iOS7Theme အလန်းလေးပါ Store မှာ 1.99ဒေါ်လာပေးရပြီး အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် အော...
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ထုတ်ဖော်ကြေငြာချက်
၂၈-၇-၂၀၁၂ ၁။ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်း နှင့် Southen Weekend (China) ဟု ...
Instagram v5.0 Apk (17 MB)
Android ဖုန်း/Tablet တွေအတွက် December 12 ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ Instagram v5.0.1 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ version မှာတော့ I...
Medical Writings (Dr.Tint Swe)
Free Firmware And Tools
ပို.စ်အသစ်တင်တိုင်း email မှတဆင့်ဖတ်လိုလျှင်Member ဝင်နိုင်ပါတယ်
Copyright © နောက်ဆုံးရ သတင်းများ. Template By Kang Kapuk